Ogaden News Agency (ONA) – Safiirka Ethiopia ee Australia iyo jawaasiista gumeysiga oo i Qariyaay iyo Tuug la qabtay talo ma leh u danbeeysay
Safiirka Ethiopia ee Australia iyo jawaasiista gumeysiga oo i Qariyaay iyo Tuug la qabtay talo ma leh u danbeeysay
Shir ay soo qaban qaabisay Qunsuuliyada guemysiga Ethiopia ee wadanka Australia gaar ahaan Magaalada Melbourn ayaa waxaa ka dhacay rabshad. Kadib markii gumeysiga Ethiopia si dhuumaaleys ah ay isugu dayeen inay Xaflad loogu Dabaal dagayay Ginbot 20, oo ku beegan maalinkii taliska Woyanuihu soo galay wadanka Ethiopia.
Hadaba Hormuudka jaaliyada somalida Ogadeniay iyo shucuubta ku hoos nool dulmiga iyo gumeysiga Ethiopia ayaa soo helay madashii ay ku dhuumaaleysanayeen Safiirka Ethiopia iyo jawaasiista Woyanuhu.
Tuug la qabtay Talo ma leh
Waxaana madashi shirkan isasoo hortubay daqiiqadihii ugu horeeyayba boqolaal gadoodsan oo raba inay burburiyaan waxshiga Woyanaha. Dadkan ayaa shcuurtoodu aad u kacsaneyd waxayna ku dhawaaqayeen ma Melbourn bay nooga daba yimaadeen, walee maanta waa lagu kala hadhi. Madashii lagu shirayay waxaa markiiba gudaha ugu daatay dhalinyaro aad moodo inay dabaabadaha duula ku socdaan, waxayna cagta mariyeen kuraasti iyo weelashii goobta diyaarka ugu ahaa safiir ku sheega iyo jawaasiistiisa rabtay inay ka tashadaaan sidii xasuuqa Ogadeniya iyo Oramada loo sii xoojin lahaa. Balse laguma simine waxaa ka dhacday halkaas fadeexo iyo i qariyaay, ninkastaabana horeydiisii ayuu u booday ileen Tuug la Qabtay Talo maleh.
Markii boqolaalka shacabka ah ee gadoodsani , markii ay madashi soo galeen goobtiina u ekaatay goob dab ka qarxay camal, qeyladii Gumeysiga waxaa la anfariiray maamulkii goobta laga kireystay waxaynaa Teleefanka dag daga ah u direen Booliska, kuwaas oo si dhaqso leh u soo gaadhay madashii, dadkiina kala qeybiyay si aysan halkaas dhibaato uga dhicin.
Wararka aan ka helayno Melbourn ayaa sheegaya in wax dhaawac ah oo dad gaadhay innuusan jirin. Balse jawaasiisti iyo aabahoodi hor ordeyayba meeshaas lagu durduriyay oo ninkastaaba jaantiisi isaga oo midna xidhan midna gacanta ku wata halkaas ku kala tageen.
Jaaliyada Melbourn ee wadanka Australia ayaa caan ku ah, aadna u taqaana sida loo ceydhsado guemsyiga iyo kalkaalkoodaba, waxaana sanadihii u danbeeyay ay marar badan albaabada isugu dhufteen kulan kalamada ay abaabulaan gumeysiga ku sugan Melbourn.